Dhammaloka Buddhist Society | Archive | Featured
Posted on 11 August 2013 by Dhammaloka
Dhammaloka Newsletter No. 6
ဓမ္မာလောကသတင်းစာစောင် အမှတ် ၆
Posted on 05 May 2013 by Dhammaloka
ယဉ်ကျေးလိမ်မာ ဗုဒ္ဓသာသနာ (ဆရာတော်အရှင်ဇနိတ)
Buddha’s Way of Life (Ashin Zanita)
Posted on 06 March 2013 by Dhammaloka
News Journal with various interesting articles
Posted on 20 December 2012 by Dhammaloka
Satippathana by Sayadaw U Zanita
ရေနံချောင်းဆရာတော်ဦးဇနိတ၏ နိဗ္ဗာန်ရရန် သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်
To read (ဖတ်ရန်)
Posted on 29 July 2012 by Dhammaloka
Noble PaHtan Compiled by Ashin Zawana
Posted on 17 February 2012 by Dhammaloka
မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာသင်တန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ၂၀၁၂ မှစ၍ ပို့ချမိအကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ သင်တန်းများကို ည ၇နာရီမှစ၍ Live လွှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Abbhidhammar course will begin on February 19, 2012, 7-8 pm. The course will be given every Sunday. You can watch Live on that time.
Posted on 03 October 2011 by Dhammaloka
Dhamma Light Journal (No. 1) ဓမ္မရောင်ခြည်စာစောင် အမှတ် (၁)
Posted on 11 July 2011 by Dhammaloka
All Dhamma families are invited to Dhamma talk by Sayadaw Ashin Kumara BiVamsa on July 13, 2001 (Wednesday) 8 pm.
ဗန်းမော်ဆရာတော် အရှင် ကုမာရာဘိဝံသ ၏ တရားပွဲသို့ ကြွရောက်ကြပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအား လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted on 05 July 2011 by Dhammaloka
All Dhamma families are invited to Dhamma Talk given by Sayadaw Ariya Vamsa on July 9, 2011, Saturday 8 pm. (အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် အရှင်အရိယဝံသ၏ တရားပွဲသို့ကြွရောက်ကြပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်)
Posted on 22 October 2010 by Dhammaloka
All Dhamma families are invited to attend weekly prayer on Saturday 8 pm, at Dhammaloka Buddhist Society. Myanmar Buddhist cultural class will also be held for the childrens on every Saturday from 11 am to3pm.
အပတ်စဉ်စနေနေ့ တွင်ကျင်းပနေသော ဝတ်ရွတ်ပွဲသို့တက်ရောက်ကြပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။